Prof Dalxa: Hogaanka baarlamaanka oo sharci darro ku tilmaamay "calaamadeynta xuduuda badda ee Somalia iyo Kenya"
Hogaanka baarlamaanka oo sharci darro ku tilmaamay "calaamadeynta xuduuda badda ee Somalia iyo Kenya"
Posted on: Sabti, 11 April 2009 - Simba, Muqdisho
Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ee dowladda KMG, Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo u waramayey idaacadda Simba, ayaa ka hadlay arrintan muranka uu ka taagan yahay ee xuduuda dhanka badda ee Soomaalida la wadaagto dalka Kenya.
Prof. Dalxa ayaa ku tilmaamay qododbkaasi inuu yahay mid qabyo ah maadaama aan la marsiinin baarlamaanka si u ansixiyo, isagoona carabka ku dhuftay madaxda dowladda KMG in aysan xaq u laheyn heshiiskaasi oo kale inay kaligooda saxiixaan.
Heshiiskan ayaa waxaa uu abuuray xiisad iyo shaki badan, iyadoo madaxda ugu sareysa dowladda KMG ay ku doodayaan in uusan jirin heshiis rasmi ah oo dhankooda la saxiixdeen dowladda Kenya, balse ay arrintu ay tahay ka hadal oo kaliya.
Prof. Dalxa ayaa sharci darro ku sheegay talaabadan ay qaadeen madaxda sare ee dowladda KMG ka dib markii ay ka talaabsadeen oo ay hareer mareen dastuurka iyo jartarka u degsan dowladda.
"Ma dhici karto wax qabyo ah in laga aqoonsado caalamka, mana loo soo marin qodobkaasi sharciga" ayuu yiri isagoo ku sugan magaalada Nairobi, Prof. Maxamed Cumar Dalxa, gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka.